အင်္ဂလိပ်စကားပြောသို့မဟုတ်သင်ယူခြင်းသည်ဇိမ်ခံပစ္စည်းမဟုတ်တော့ပါ။ လုံးဝနီးပါးမျှပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရှိတ်စပီးယား၏ဘာသာစကားကိုလျစ်လျူရှုနိုင်ပါတယ်။ ပိုပိုပြီးဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းကမ္ဘာမှာယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိရမယ်။
အင်္ဂလိပ်စာကိုခြစ်ရာကနေသင်ယူဖို့၊ တိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့၊ ပြီးပြည့်စုံအောင်လုပ်ဖို့၊ မျက်နှာချင်းဆိုင်အတန်းတက်ဖို့စာရင်းသွင်းဖို့မလိုတော့ဘူး။ သင်အလိုဆန္ဒအပြင်တည်ငြိမ်သောအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုရှိသည့်ပုံသေသို့မဟုတ်မိုဘိုင်းပစ္စည်းတစ်ခုသာလိုအပ်သည်။
1 စောင့်ရမလား? Candy Crush သို့မဟုတ် Agario.io ကိုမသုံးပါနှင့်။ အင်္ဂလိပ်စာကိုသာလေ့လာပါ။
2 အခွားသောရွေးချယ်စရာများကိုပင် "တရားဝင်" လျော့နည်း
စောင့်ရမလား? Candy Crush သို့မဟုတ် Agario.io ကိုမသုံးပါနှင့်။ အင်္ဂလိပ်စာကိုသာလေ့လာပါ။
ပွင့်လင်းသောအင်္ဂလိပ်သို့မဟုတ် ABA အင်္ဂလိပ်စသည့်စာမျက်နှာများကိုအများပြည်သူသိရှိနိုင်သည် အားလုံးအဆင့်ဆင့်မှအဆင်ပြေအောင်ပြီးပြည့်စုံသောသင်တန်းများ။ ကျောင်းသားသည်နေ့နှင့်အချိန်ကိုသင်ခန်းစာယူရန်ဆုံးဖြတ်မည့်အချိန်ကိုဆုံးဖြတ်သည်။
ဗြိတိသျှကောင်စီ၊ ဗြိတိသျှအစိုးရပေါ်မူတည်သည်နည်းပညာအသစ်များနှင့်လည်း၎င်း၏ရိုးရာသင်တန်းကိုအဆင်ပြေအောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၎င်းရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုမှာအခြားရွေးချယ်စရာများအနက်မှအပြန်အလှန်လေ့ကျင့်ခန်းများ၊ ဂိမ်းများနှင့်အသံနှင့်ဗီဒီယိုကလစ်များပါဝင်သည်။ အလားတူပင်သူတို့ရှိသည် Android, iOS နှင့် Ovi အတွက်တရားဝင်လျှောက်လွှာကိုရရှိ ဒီတော့အတန်းစာသားဘယ်နေရာမှာမဆိုခေါ်ဆောင်သွားနိုင်ပါတယ်။
အခွားသောရွေးချယ်စရာများကိုပင် "တရားဝင်" လျော့နည်း
LyricsTrainig သည်သီချင်းဆိုခြင်းဖြင့်အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပေးသည်။ သုံးစွဲသူများအကြိုက်ဆုံးသီချင်းများကိုဖွင့်သည့် Karaoke mode အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ မင်းပုံစံ Ed Sheerman ကသို့မဟုတ် ဟလို Adele သည်ကျောင်းသားများနှင့်လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်သည်။
ရာနဲ့ချီတဲ့စီးရီးတွေနဲ့စာတန်းထိုးရုပ်ရှင်တွေကို Ororo.tv မှာရနိုင်တယ်။ အသစ်အဆန်းမှာဆွေးနွေးမှုကိုနှေးကွေးစွာ (သို့) မြန်မြန်ကြားနိုင်ရန်ပြန်ဖွင့်အမြန်ကိုချိန်ညှိနိုင်သည်။ ၎င်းတွင်နေ့စဉ်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာပါဝင်သည့်အခမဲ့အကန့်အသတ်ဖြင့်သာအသုံးပြုနိုင်ပြီးအကန့်အသတ်မရှိပေးရသောအရာလည်းဖြစ်သည်။
YouTube တွင်အင်္ဂလိပ်စကားပြောဆိုရန်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ Muncill Duncan သည်လူကြိုက်အများဆုံး“ youtubers” တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆင့်အားလုံးနှင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုများအတွက်ဗီဒီယိုအတန်းအပြည့်အစုံရှိသည်။ ဘီဘီစီအနေဖြင့်လူမှုဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်တွင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လမ်းကြောင်းရှိသည် ဂူဂဲလ်မှပိုင်ဆိုင်သောဗီဒီယိုများ၏။ စိတ်ကူးမှာ ၁၀ မိနစ်အတွင်းရုံးခန်း၌အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူရန်ဖြစ်သည်။
ဓာတ်ပုံရင်းမြစ် - အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာရန်ဘလော့ဂ် / ultရာဝတီ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » ယဉျကြေးမှု » အင်တာနက်ပေါ်တွင်တစ်နေ့လျှင် ၁၀ မိနစ်အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာရန်